Imishini yokuhlangula iLufthansa eAfghanistan ngokujikeleza ngokupheleleyo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » Imishini yokuhlangula iLufthansa eAfghanistan ngokujikeleza ngokupheleleyo
Iindaba eziQhekezayo zaseAfghanistan • Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • ulwaphulo-mthetho • Iindaba zaseJamani zokuPhula • Iindaba zikaRhulumente • iindaba • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
ILufthansa ibhabhe ngaphezulu kwe-1,500 yeembacu zase-Afghanistan ngokukhuselekileyo ukuya eJamani
ILufthansa izakuqhubeka nokusebenza ngenqwelomoya kwiTashkent kwiintsuku ezizayo ngokusebenzisana neOfisi yamanye amazwe yaseJamani.
Ukusukela ngeveki enye, ngaphezulu kwe-1,500 yabantu abalekiselwe eJamani besuka eTashkent kwiinqwelomoya ezilishumi elinambini.
Iqela lokhathalelo laseLufthansa lijonga abo bafuna ukhuseleko emva kokufika.
Iinqwelomoya ezininzi ezicwangcisiweyo kwiintsuku ezizayo.
Kule veki iphelileyo, iLufthansa ibisenza inqwelomoya ngenqwelomoya yokubhabha iimbacu ezivela kumbindi weAsia zisiya eJamani. I-Airbus 340 indiza ende isetyenziswa kwimeko nganye. Ukuza kuthi ga ngoku, iinqwelo-moya zemihla ngemihla zizise eFrankfurt abantu abangaphezulu kwe-1,500.
Ukufika kwabo eFrankfurt, iqela lenkxaso laseLufthansa lincedisa abafikayo ngokutya, iziselo kunye nempahla, kwaye libonelela ngonyango lokuqala kunye nonyango lwengqondo. Kubantwana abaninzi ngoku befika eFrankfurt, kumiselwe indawo yokudlala kunye nepeyinti kwaye kwanikelwa ngezinto zokudlala.
ILufthansa yayinikwe ikhontrakthi ngurhulumente waseJamani ukuba incedise ekufudukeni kweembacu zaseAfghan ngeenqwelo moya zayo eziqeshiweyo zeAirbus A340. Inqwelomoya yenqwelomoya yenqwelomoya yaseJamani ayihambi iye eAfghanistan kodwa endaweni yoko iqokelela abantu abasuswe kweli lizwe yiBundeswehr (imikhosi yaseJamani) eya eDoha, Qatar naseTashkent, eUzbekistan.